Wararka Maanta: Axad, Aug 19, 2012-Dadweynaha Somaliland oo si weyn looga dabaal degay maalinta Ciidda iyo madaxweynaha oo Somalia u duceeyey
Dadweynaha Somaliland oo si weyn looga dabaal degay maalinta Ciidda iyo madaxweynaha oo Somalia u duceeyey Axad, Ogoosto, 19, 2012 (HOL)-Dadweynaha Somaliland ayaa maanta si weyn ugu dabaal degay ciidda soonfur oo caalamka oo dhan laga wada Ciiday.
Dhamaan gobolada iyo degmooyinka Somaliland ayaa maanta si weyn looga dareemayey Ciidan iyo damaashaadkeedda, kuwaas oo ku faraxsanaa dhamaystirka bishi barakaysnayd ee Ramadaan, iyagoo ilaahay ka baryey inuu khayrkeedda siiyo, iskuna hambalyeynayey ciid mubaarak iyo ciid wanaagsan.
Garoomadda iyo masaajidadka waaweyn ee caasimadda magaaladda Hargeysa ayaa iyaguna hiirtii waabari loogu kalahay si ay u soo gutaan salaadda Ciidda, waxaanay goobahaasi laga soo jeediyey khudbado lagaga hadlayo maalintay iyo khayrkeeda, iyadoo dadkana lagu guubaanayey nay sidii ay bishii Ramadaan cibaadadda u badsadeen ay ku sii wadaan.
Madaxweynaha Somaliland Md: Axmed Maxamed Maxamuud (Siillaanyo) ayaa isna dadweynaha kala qaybgalay tukashadda salaadda, waxaanu dadweynaha ugu duceeyey sanadkan sanadkiisa inay ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo isagoo ugu hambalyeeyey maalinta qiimaha badan ee Ciidda Soonfur.
“Waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo oo aan dunida u sheego inay Somaliland tahay dal madaxbanaan oo aan cidna marti uga ahayn dawladnimadeeda iyo madaxbanaanideeda”ayuu yidhi madaxweynaha oo khudbadii salaadda Ciidda ka jeediyey masaajid jamaca weyn ee badhtamaha magaaladda Hargeysa, waxaanu intaas ku daray “ waxaan doonayaa inaan caalamka u cadayno inay dadka Somaliland yihiin dad muddo dheer u soo halgamay madaxbaanidooda oo aanay jirin wax ka hor imanaya iyo wax ay uga gabanayaan toona”.
Madaxweynuhu waxa kale oo uu duceeyey inuu dhibaatadda ka qaato Somalia, isla markaana ku guulaystaan inay dawlad wanaagsan ay dhistaan “ waxaan jecelnahay in wadanka Soomaaliya ilaahay dhibaatada ka qaado oo ay nabad galyo iyo dawlad fiican samaystaan, oo aanu noqono dad jaara oo walaalo ah”ayuu yidhi madaxweynuhu.
Madaxweynuhu waxa uu shacabka Somaliland ugu baaqay inay isa saamaxaan oo nabadgalyadda ilaaliyaan.
Madaxweynuhu markii dambana waxa uu dadweynaha ku qaabilay qasriga madaxtooyadda oo ay dadweyne badani ku booqdeen, isla markaana ay ku soo salaameyn.
Dhinaca kale, magaaladda ayaa waxa soo buux dhaafiyey Caruur aad loogu labisay, kuwaas oo laga dareemayey farxadda iyo rayn raynta ciidda, iyagoo si weyn ugu soo baxay suuqyadda, isla markaana sitay alaabooyinka loogu tallogalay inay ku ciyaaraan.
Guud ahaan maalinta ayaa caalamka islaamka si weyn oo midaysan looga ciiday, iyadoo aanay jirin wax khilaaf ah oo ka dhashay Ciidan iyo maalinta la ciidayo, taasina waxay guul u tahay dhamaan ummadda Islaamka oo ka dhigaysa umadd isku duuban oo midaysan.Barkhad-Ladiif M. Cumar, Hiiraan Online barkhadladiif@hiiraan.comHargeysa, Somaliland
Isniin, August 19, 2012(HOL): Magaalada Västerås ee gobolka Västmanland ee dalka Sweden ayaa maanta si weyn looga ciiday, iyadoo dadka ku tukadeen Salaaddii Ciidda goob aad u ballaaran oo loo diyaariyay. Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo si weyn looga ciidey 8/19/2012 10:00 AM EST